Big City Small World (Series2Episode 10 – A Date) - Myanmar Network
Big City Small World (Series2Episode 10 – A Date)
Posted by Forum Moderator2on January 25, 2013 at 16:20 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Series2Episode 10 – A Date (အတွဲ-၂၊ အခန်း(၁၀) (ချိန်းသည့်ရက်)
Series2Episode 10 - A Date ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
Sarah finally agrees to go out with Carlos but they have no idea where to go. And is Fadi really jealous of Harry for spendingalot of time with Olivia?
နောက်ဆုံးမှာတော့ ဆာရာက ကားလို့(စ)နဲ့ လျှောက်လည်ဖို့ သဘောတူလိုက်ပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သွားရမှန်းမသိဖြစ်နေကြတယ်။ နောက်ပြီး ဖာဒီကလည်း အော်လီဗီယာနဲ့ အချိန် တော်တော်များများအတူတူရှိနေတဲ့ ဟယ်ရီကို တကယ့်ကို မနာလိုဖြစ်နေတာလား?)
Carlos: I can’t believe Sarah said ‘Yes’!
ဆာရာလက်ခံလိုကတာကို ငါ မယုံနိုင်ဘူးကွာ!
Fadi: Well done, mate!
Johnny: So where are you going to take her?
ကဲ့ဒါဆိုရင် မင်းသူ့ကို ဘယ်ခေါ်သွားမှာလဲ?
Carlos: Oh, I don’t know... We didn’t decide where to go.
အင်း … ငါ မသိသေးဘူး…ဘယ်ကို သွားမယ်ဆိုတာ ငါတို့ မဆုံးဖြတ်ရသေးဘူး။
Fadi: Take her out for dinner, somewhere nice.
နရာကောင်းကောင်းတစ်ခုမှာ ညစာစားဖို့ သူ့ကို ခေါ်သွားပေါ့
Carlos: Yeah, that’sagood idea...
Johnny: I knowagreat Chinese place.
Carlos: Yes, but she always eats Chinese food – perhaps she’d likeachange, try something different?
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သူက အမြဲတရုတ်စာ စားနေကျလေ။ သူ့အနေနဲ့ အပြောင်းအလဲလေးများဖြစ်ချင်မလားလိုို့ တခြား တစ်ခုခုကိုစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့။
Fadi: All the restaurants Johnny goes too are really expensive! Take your credit card if you go there!
ဂျွန်နီသွားတဲ့ စားသောက်ဆိုင်အားလုံးက တကယ့်ကို ဈေးကြီးတာ။ အဲဒီကို သွားမယ်ဆိုရင်တော့ မင်းအကြွေးဝယ်ကဒ်ယူသွား။
Johnny: I like to spend my money well!
ငါကတော့ ငါ့ပိုက်ဆံကို အကျိုးရှိရှိသုံးချင်တယ်။
Carlos: I thought I could cook something for her. I want to beachef, you know.
ငါကတော့ သူ့အတွက် တစ်ခုခု ချက်ပေးမယ်လို့ စဉ်းစားထားတာ။ ငါက စားဖိုမှူးဖြစ်ချင်တာလေ သိကြတယ်မဟုတ်လား?
Johnny/Fadi: Yes, we know.
Fadi: Don’t invite her to your house onafirst date, though.
ဒါပေမဲ့လည်း ပထမဦးဆုံး ဒိတ်လုပ်တဲ့နေ့မှာတော့ သူ့ကို မင်းအိမ် မခေါ်နဲ့ဦးလေ။
Carlos: No? Why not?
Fadi: It looks too pushy, too forward.
Carlos: Oh, I see.
Johnny: Yeah... take it slowly!
Carlos: Oh, OK. She’s coming to the café soon, so we’ll talk about it then.
အာ်..အေးပါ။ သူမကြာခင် ကော်ဖီဆိုင်ကို လာလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့မှ ဒီအကြောင်းပြောကြတာပေါ့။
Olivia: Hello guys!
Fadi: Yeah, I’m fine mate. You?
အး ပြေပါတယ် ကိုယ့်လူ၊ မင်းေ၇ာ?
Harry: Hmm... Not so great...
အင်း သိပ်တော့ မပြေလှဘူးကွာ
Fadi: What’s up?
Harry: Bindyu’s really angry with me.
Johnny: Why’s that?
Harry: She thinks I’m spending too much time with Olivia.
ငါက အမြဲလိုလို အော်လီဗီယာနဲ့ ရှိနေတာလို့ သူက ထင်နေတယ်လေ။
Olivia: But it’s work! I told Bindyu that Harry’s helping me to fix my webpages.
ဒါပေမဲ့ အဲဒါက အလုပ်လေ။ ကျွန်မ ဘင်ဒျူကိုပြောပါတယ်။ ဟယ်ရီက ကျွန်မရဲ့ ၀က်(ဘ)ပေး(ဂျ)တွေကို ကူပြီး ပြင်ပေးနေတယ်လို့လေ။
Fadi: Is she jealous?
Harry: Shhhh! Be quiet! Here she is now!
Bindyu: Hello Harry! Hi all!
ဟယ်လို ဟယ်ရီ၊ အားလုံးပဲဟိုင်း
Bindyu: Hello, Olivia.
Bindyu: Did Harry help you to fix your website?
မင်းဝက်(ဘ)ဆိုက်ကို ဟယ်ရီ၊ ကူပြင်ပေးလား
Olivia: Well, not quite. He still needs to do some more work.
အင်း-အကုန်တော့မဟုတ်သေးဘူး။ သူနဲနဲထပ် လုပ်ဖို့ ကျန်နေသေးတယ်။
Olivia: Listen, I’ve got an idea – why don’t you both come to my flat this evening? Harry can do some work for me, and I’ll make dinner for everyone.
နားထောင် ကျွန်မအကြံရပြီ။ ဒီညနေ ရှင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကျွန်မရဲ့တိုက်ခန်းကို လာကြပါလား။ ဟယ်ရီက ကျွန်မအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးပြီး ကျွန်မကတော့ အားလုံးအတွက် ညစာချက်ပေးမယ်
Harry: OK! What do you think Bindyu?
အး ကောင်းသားပဲ၊ ဘင်ဒျူကော ဘယ်လိုသဘောရလဲ?
Bindyu: Well, OK, I suppose so.
အင်းလေ ကောင်းတယ်လို့ ထင်ရတာပဲလေ
Olivia: Erm, there is just one problem – I have to look after my nephew Joe this evening. He’s very, erm, energetic....
အဲ ပြဿနာ တစ်ခုပဲရှိတယ်၊ ဒီညနေကျွန်မ့ရဲ့တူလေးဂျိုးကို ထိန်းရမယ်။ သူက အရမ်းကို အဲအရမ်းကို ဆော့လွန်းတယ်။
Bindyu: Oh, that’s OK... I love children!
အော် ကိစ္စမရှိပါဘူး၊ ကျွန်မက ခလေးချစ်တတ်တယ်
Olivia: Great! Well, I’ll see you all this evening!
ကောင်းလိုက်တာ။ ဒါဆို အားလုံးကို ညနေကျရင်တွေ့မယ်
Bindyu: We’ll come about seven o’clock! Come on, Harry, we have to go now.
ကျွန်မတို့ ည ခုနစ်နာရီလောက် လာခဲ့မယ်၊ ဟယ်ရီရေ လာလေ၊ ငါတို့ အခုသွားရတော့မယ်
Harry: Er, OK, yeah... Bye everyone!
အော်အေး ကောင်းပြီ၊ အားလုံးပဲ ဘိုင်
ကဲ အော်လီဗီယာ မင်းကတော့ ဟယ်ရီနဲ့အတူ အချိန်တော်တော်များများရှိနေတာပဲ။
Olivia: Oh shut up you! Are you jealous as well?
အာ်-ရှင့်ပါးစပ်ပိတ်ထားစမ်းပါ။ ရှင်လည်း ပဲ မနာလိုဖြစ်နေတာလား?
Fadi: Me? No! No way!
ငါက? မဟုတ်ပါ။ ဘယ်နည်းနဲ့မှ မဟုတ်ပါ။
Olivia: Good. You’ve got lots of girlfriends, haven’t you?
ကောင်းတာပေါ့ နင့်မှာလည်း ရည်းစားတွေမှ အများကြီပဲးမဟုတ်လား?
Fadi: Me? Oh yeah. Hundreds!
ငါ့မှာ? အေးဟုတ်တယ်၊ ရာနဲ့ကိုချီနေတာ
Carlos: It’s Sarah!
Sarah: Hello all!
Sarah: Hi Carlos!
Sarah: Listen, I’ve only gotaminute, I can’t stay.
နားထောင် ကျွန်မ တစ်မိနစ်ပဲ အချိန်ရတယ်၊ ကျွန်မနေလို့မရဘူး
Carlos: Er... OK...
Sarah: I just wanted to say, I’ve got an invitation toanew art gallery opening this evening.
ဒီညနေ ပန်းချီခန်းမ အသစ်တစ်ခု ဖွင့်ပွဲအတွက် ဖိတ်စာရထားတယ်ဆိုတာ ပြောချင်လို့ပါ
Sarah: Would you like to come with me?
Carlos: Erm, er, yeah! Sure!
အင် - အေးလိုက်တာပေါ့
Sarah: Great! I’ll meet you here at six!
ကောင်းပြီ၊ ဒီမှာ ၆း၀၀ နာရီကျရင် ဆုံကြမယ်
Carlos: OK. see you later then. Bye!
အေး …ဒါဆိုရင် နောက်မှ တွေ့ကြမယ်။ ဘိုင်
Sarah: See you later! Bye!
Fadi: Hey! That’s your date!
ဟေး …အဲဒါ မင်းရဲ့ဒိတ်ပဲပေါ့
Johnny: Now you don’t have to worry about where to take her!
အခုဆို သူ့ကို ဘယ်ခေါ်သွားရမလဲဆိုတာကို မင်း မပူရတော့ဘူးပေါ့
Carlos: But... but... I am worried! I don’t know anything about art! What will I say?
ဒါပေမဲ့ ငါ စိတ်ပူတယ်။ ပန်းချီနဲ့ ပတ်သက်ရင် ငါဘာမှ မသိဘူး။ ငါဘာပြောရမလဲ။
Fadi/Johnny: You’re going to find out!
Permalink Reply by sikedeveechan on May 23, 2013 at 2:25